Ukuphupha ngeCrucifix Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Igama elithi rasp lisetyenziselwa ukuchaza isixhobo ekungenziwa ngaso izinto ezithambileyo. Nge-rasp, umbandela uyasuswa kwizinto eziphathekayo ngeetshiphusi.
Izinto ezihlala ziqwalaselwa nge-rasp zibandakanya iinkuni, iplastiki, okanye ilitye elithambileyo. Nokuba uphondo okanye isikhumba sinokusetyenzwa nge grater elungileyo. Kodwa unokufumana iigrasi ezahlukeneyo kunye neebrashi ekhitshini.
Kuxhomekeka kwinto leyo, i-rasp inamazinyo amakhulu okanye amancinci amakhulu. Oku kuthetha ukuba ukujiya okanye ukuba nkulu kwala mazinyo aqhekezayo, kokukhona izinto zisuswa. Ngokukodwa ngeerps ezinobunzima, umsebenzi olungelelaniswe nefayile. I-Farriers ikwasebenzisa ii-rasps ezikhulukazi. Uyisebenzisa ukukhathalela iimpuphu zezilwanyana, umzekelo kumahashe.
Isici esikhethekileyo ngaphakathi kwee-rasps yinto ebizwa ngokuba yi-rasp rasp, eyaziwa ngokuba yi-spinous rasp. Ingongoma yayo ikhumbuza i-drill yeplanga, kodwa ke ibonisa amazinyo e-rasp aqhelekileyo. I-prickly ikakhulu isetyenziselwa ukwandisa umngxunya wokugrumba emva kokuba kusombiwa indawo yokusebenza.
1 Uphawu lwephupha «rasp» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «rasp» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «rasp» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «rasp» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kubona kwi-rasp njengomfanekiso wephupha ikakhulu sisalathiso kulowo uphuphayo kwimizamo yakhe el mundo yomlindo yamkelwe yiba. Uya kuthi kungekudala uvuzwe ngokukhuthala kwakho kwimeko ethile.
Ukuba uhlikihla into kwi-rasp ephupheni lakho, njengemifuno, unokuba neengxabano kwaye Ukuphazamiseka ngaphambili. Ukuba usebenza ne-rasp okanye inqwelomoya, uhlala ulumkile kwilizwe labalindi. Kuba unokwenzakalisa omnye umntu ungajonganga ngabom okanye ngabom.
Ngokubanzi, ukuba umphuphi uzenzakalise ngokukrwela, uya kuba mnye ukuhluleka Kuya kufuneka uyamkele, enokukugcina uxakekile ixesha elide. Ukuba ukophula ngokungakhathali igrater xa ulele, unokuba ujonge phambili kumzuzu wempumelelo kunye nolonwabo.
Umbono we-rasp corneal ungabhekiswa njengomfanekiso wephupha kumnqweno wokulala ukufumana ngaphakathi. Imeko yemvisiswano nokumisela ukulingana. Ukuba ukuphupha kusebenza kakuhle xa ulele, ungakulungela ukuvusa ubomi ukubonisa abanye abantu icala lakho elibuthathaka ngokunjalo. Awusafuni ukuyifihla kwabanye.
Uphawu lwephupha «rasp» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "rasp" lunokutolikwa njengefayile. Ke ngoko, iphupha elinje linokubhekisa kwinto yokuba ukuphupha kokwakho eyahlukileyo ulahlekelwa ngakumbi nangakumbi. Kungenxa yokuba uhlengahlengisa kakhulu kwimeko-bume yakhe nakwabanye. Kuya kufuneka uzame ukungazilahlekeli ngalo lonke uhlengahlengiso lwakho.
Ukuba i-rasp ibonwa ephupheni ngokunxibelelene ne-chisel okanye isando, oku kunokuchaphazela ubushushu kwaye Inzondelelo yomntu oleleyo, ebonisa ebomini bakhe bokuvuka.
Ukuba ubona umkroli okanye isitena esisebenza nge-rasp ebuthongweni bakho, uhlala usilwa nobuchule bakho kwaye ungabuhoyi okanye ubuthintele.
Ukuba usebenza i-limestone okanye i-marble nge-rasp ephupheni lakho, kuya kufuneka, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ngokwakho ukuba bhetyebhetye ukuba uqaphele. Ngale nto, umntu ochaphazelekayo uya kuba nakho ukumelana neemeko ezinzima.
Uphawu lwephupha «rasp» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "rasp" lunokusetyenziswa njenge Zixhobo ibonwe, efumanekayo kumphuphi kwindawo yokomoya ukuqhubela phambili ukukhula kwakhe.